Ciidamada Dowladda oo Al-Shabaab jab xooggan ugu gaystay deegaanka Nambar 50 – Balcad.com Teyteyleey
Ciidamada Dowladda oo Al-Shabaab jab xooggan ugu gaystay deegaanka Nambar 50
Ciidamada Xoogga Dalka ayaa jab xoogan u geystay maleeshiyaad ka tirsan Al-Shabaab oo weerar ku soo qaaday fariisin ciidamadada Dowladda ku leeyihiin Deegaanka No: 50, islamrkaana waxay laayeen dad fara badan oo maato ah.
Cabdullaahi Cali Axmed Waafow Guddoomiyaha deegaanka nambar 50 ayaa sheegay in dagaalkaasi ay uga dileen Al-Shabaab labo ka tirsan maleeshiyaadkooda, kuwaasi oo ay iminka gacanta ku hayaan meydadka labada qof ee laga dilay.
Guddoomiyaha ayaa sheegay in dagaalka uu socday in ka badan 48 saacadood, kaasi oo ka dhashay markii Shabaabku ay weerareen tuulooyin hoostaga deegaanka Nambar 50, halkaasi oo ay ku laayeen dad maato ah iyo xoolihii ay lahaayeen.
Dhanka kale Guddoomiyaha ayaa sheegay in dagaalku uu ka bilowday weerar ay Shabaabku ku soo qaadeen tuulo 8 km u jirta deegaanka Nambar 50, halkasi oo ay ku gubeen guryo, kuna laayeen carruur iyo dad kale If you don’t want to spend a pretty penny for your Sildalis, just buy it right now for 1.44 USD only! oo maato ah.
Shir loogu gogal xaarayo shirka London oo maanta ka furmay Magaalada Muqdisho